महाभूकम्पको दुई वर्ष : धर्ती हल्लिएको त्यो दिन… « Anumodan National Daily
महाभूकम्पको दुई वर्ष : धर्ती हल्लिएको त्यो दिन…
प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७४, मंगलवार ०७:५८
२०७२ वैशाख १२ गते । त्यस्तै बाह्र बज्न लागेको थियो । म किनमेलका लागि न्युरोडतर्फ जाँदै थिए । गाडी चढिसकेको थिइन । एकाएक बेस्सरी भुईँ हल्लिन थाल्यो । मैले भेऊ नै पाउन सकिन– ‘के हुँदैछ भनेर । कम्पन बढ्दै गयो । जमिन अझैं जोडले हल्लिन थाल्यो । म उभिन नसकेर थ्याच्च बसे भुईंंमा ।’ वरपरका सबै जना ‘भुईँचालो, भुईँचालो’ भन्दै चिच्याउन थाले । रुवाबासी चल्यो । मैले केही सोच्न सकिन, ‘आज जीवनको अन्तिम दिन रहेछ’ भन्ने लाग्यो । वरपरका घरहरू हल्लिरहेका थिए । छेउमै एउटा पाँचतले घर गल्र्याम्म ढल्यो । अरू घर ढलेको देखियो । एकाएक चारैतिर धुलो र धुवाँको मुस्लो उठ्यो । केही बेरमा जमिन हल्लिन केही शान्त भयो । मैले डेरामा एक्लै बसेकी बहिनी सम्झिएँ । ‘शनिवारको दिन हो’ भन्दै बिहान खानासमेत नखाएर साथीसँग घुम्न निस्केको भाइ सम्झिएँ । उनीहरू दुवैलाई फोन गर्न खोजे, लाग्दै लागेन ।
मेरा वरपर भएका सबै आ–आफ्ना आफन्तको खोजीमा थिए । सबैका आँखामा आँसु र त्रास । छिनछिनमा भुईँचालो जाँदा चिच्याहट बढ्थ्यो । भागौ भने वरपर घरैघर भएको साघुँरो बाटो । जसोतसो एउटा खुला ठाउँमा पुगियो । वरपरका घरबाट तथा बटुवाहरू सबै ज्यान जोगाउन त्यहीँ भेला भएका थिए । खुला ठाउँमा बसे पनि छिनछिनमा जाने भुईँचालो र घरपरिवारसँग फोनमा सम्पर्क हुन नसक्दा मन निकै आत्तिरहयो ।
करिब एक घण्टापछि अभिभावकहरूसँग फोनमा कुरा भयो । भाइ र बहिनी सकुशल रहेको थाहा पाएपछि बल्ल सन्तोषको श्वास फेरे । हामीहरू करिब तीन घण्टा सोही ठाउँमा बसेपछि अन्य साथीहरू बोलाएर कलंकी चोकबाट डेरातिर फर्किएँ । त्यसबेलासम्म पनि भूकम्पका धक्का आइरहेका थिए । जमिन हल्लिरहयो, डरले मन काँपिरहयो । डेरा भएको टोलका मान्छे सबै चौरमा थिए । जताततै भत्किएका घर । संग्ला घरहरू पनि उदास भएर एक्लै उभिरहे जस्तो लाग्यो । घरहरू थिए, बास थिएन । घरमालिकहरू टोलाउँदै आफ्ना घर हेरिरहेका थिए । भीडमा कसैले भन्यो– ‘स्वयम्भूतिर होस्टल भत्किएर धेरै बालबालिका पुरिए रे ।’ असन, न्युरोड जस्ता बाक्लो घरहरू भएको ठाउँमा के दुर्दशा भयो होला । धरहरा ढलेको सुने । राजधानीका केही नाम चलेका सपिङ सेन्टर, मल पनि भत्किएको सुनियो ।
त्यो विनाशकारी भूकम्पले ल्याएको विनासले मन आत्तिइरहेको थियो, अझ हल्ला चलिरहे– ‘अझैं आठ/नौ रेक्टरस्केलको भूकम्प जान्छ रे ।’ कतिबेला, कति शक्तिशाली भुईँचालो जान्छ भन्ने अनुमान थिएन । बस् खुला आकाशमुनि त्रिपालको बास् । जसोतसो व्यवस्था गरिएको खानाले त्यो कालो शनिवार कट्यो ।
भोलिपल्ट, अर्थात् वैशाख १३ गते आइतबार बिहान ५ बजे आएको अर्को भूकम्पले निद्रा खुल्यो । दिनभर सानाठूला धक्का आइरहे । बेलुकी प्रकृति अझै बेइमान भइदियो । करिब तीन घण्टा परेको मुसलधारे वर्षाले जमिन भिजेर बस्नै नहुने भयो । मलाई हनहनी ज्वरो आयो, त्रिपालको छेउ समातेर रात बिताए ।
दिनभर सानाठूला धक्का आइरहे । बेलुकी प्रकृति अझै बेइमान भइदियो । करिब तीन घण्टा परेको मुसलधारे वर्षाले जमिन भिजेर बस्नै नहुने भयो । मलाई हनहनी ज्वरो आयो, त्रिपालको छेउ समातेर रात बिताए ।
भत्किएका घरभित्र च्यापिएका लास, पानीको अभाव, महामारी फैलिने त्रास । अरू झैँ हामी पनि छिटै राजधानी छोड्न चाहन्थ्यौं । राजधानीमा घर भएकाहरू घर छोडेर खुला ठाउँमा सुरक्षित हुने प्रयास गरिरहे । को सानो, को ठुलो ? को धनी, को गरिब ? सबैको सडकमा बास । प्रकृतिका अगाडि हामी सबै निरिह छौँ ।
भूकम्प गएको तेस्रो दिन, वैशाख १४ गतेसम्म पनि बिजुली आएन । खानेपानी आपूर्ति सुचारु भएको छैन । मोबाइलको चार्ज सकिएर फोन सम्पर्क टुटेको छ । रेडियो, टेलिभिजनको कुरै भएन, एउटा पत्रिकासम्म किन्न पाइदैन । १५ रुपैयाँ मूल्यको चाउचाउ २५/३० रुपैयाँमा बिके । जति महँगो भए पनि बाँच्नका लागि किन्नै पर्‍यो ।
जसोतसो गरेर तेस्रो दिन एउटा गाडी रिजर्भ गरेर धनगढी फर्कियांै । तर, कष्टसास्ती कम हुने नामै लिदैन । मुग्लीन बजारदेखि करिब डेढ किलोमिटर अगाडि पहिरो गएको रहेछ, ६ घण्टा जाममा परियो । त्यही खाना खाने एउटा होटेलमा टिभी हेर्ने अवसर पाइयो । अनि पो थाहा भो– ‘भूकम्पले त राजधानीबाहिर पनि निकै क्षति पुर्‍याएको रहेछ ।’ गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्ला त सोत्तरै भएछन् ।
अहिले म धनगढी घरमा छु । भूकम्पबाट भएको क्षतिको धेरै खबर सुनेर होला, अहिले टेलिभिजन हेर्न मन लाग्दैन । कोही बोल्दा पनि झिझो लाग्छ । कसैले भूकम्पको कुरा गरे बाटो काटेर हिडौं जस्तो लाग्छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ठाउँका मानिसले खाना र पानी नपाएको, घरले च्यापेका लास निकाल्न नसकेको खबर सुन्दा मुटु चिरिएर आउँछ । हामी प्रार्थना मात्रै गर्न सक्छौँ– ‘हे भगवान् यो सङ्कटबाट पार लगाऊ ।’ दु:खी, घाइते तथा मृतकका परिवारलाई सङ्कटको सामना गर्ने साहस देऊ । क्षतविक्षत तन र मनका घाउहरू छिटै निको होउन् ।
म जीवनभरी वैशाख १२ गते सायद भुल्ने छैन । म कामना गर्छु– ‘अब यस्तो चाल्नोसरी भुईँ हल्लाएर खुसी, आफन्त, जायजेथा खोस्ने दिन कहिल्यै नआवस् ।’ भूकम्पपछिका त्रासदीपूर्ण दिन र रात । मानिसले जीवनभरी मिहिनेत गरेर उभ्याएका घर एकै छिनमा स्वाहा भए । आउन त एकैछिन आयो अत्याउने गरी र जीवनभरी नपुरिने घाउ छोडेर गयो ।
राजधानी भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको सुनिन्थ्यो । सञ्चार माध्यमहरूले भूकम्पबाट बच्ने उपाय भनेर समाचार सामग्री दिइरहे । तर भूकम्प आयो, न समय अडकल गर्न सकियो, न क्षेत्र नै । भूकम्प न बाढी हो, खोलानालाबाट टाढा बसेर ज्यान जोगियोस् । भूकम्प न कुनै पहिरो हो भिरपाखाबाट टाढा बसेर ज्यान जोगाउन सकियोस् । कसैलाई हाँस्दा–हाँस्दै लग्यो, कसैलाई खाँदा–खाँदै लग्यो । फेरि कहिल्यै नफर्काउने गरी लग्यो । [email protected]